အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတ Donald Trumpဟာ ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီင်္လ ၂၀ရက်နေ့မှာ ၄၅ ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှာပါ။ အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံ သမ္မတ Donald Trump က နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် ကြီးမြတ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်အောင် အလုပ် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ညီညွတ်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ ကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေကို အမေရိကန် ပြည်သူတွေ တွေ့မြင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ အကြိုနေ့မှာ မစ္စတာ Trump ပြောဆိုထားပါတယ်။
1 President-elect Donald Trump and his wife Melania arrives forachurch service at St. John’s Episcopal Church across from the White House in Washington, Jan. 20, 2017, on Donald Trump's inauguration day.
2 Dawn breaks behind the Capitol Dome as last minute preparations continue for swearing in of Donald Trump as the 45th President of the United States, Jan. 20, 2017.
3 Rev. Luis Leon greets President-elect Donald Trump and his wife Melania as they arrive forachurch service at St. John’s Episcopal Church across from the White House in Washington, Jan. 20, 2017, on Donald Trump's inauguration day.
4 Vice President-elect Mike Pence and his wife Karen are greeted by. Rev. Luis Leon as they arrive forachurch service at St. John’s Episcopal Church across from the White House in Washington, Jan. 20, 2017, on Donald Trump's inauguration day.